Allgedo.com » 2011 » May » 04
Home » Archive Daily May 4th, 2011 Abwaan Caalamiin oo ka gabyay dagaalkii Garbahaarey ka dhacay kaddib markii uu qoys qaraabadiisa ah ku waayay dagaalkaas May 4, 2011 Habaynkii ay taariikhdu ahayd May 2, 2011 ayaa waxaa madaafiic hoobiya ah ku garaacay magaalada G/haaray Shababka waxaana ku geeriyooday madaafiicdaas ay siteen wax magaratadu qoys dhan oo Caalamiin ay ilma adeer ahaayeen. Waxaa isku mar dhintay Cajab oo ahaa aabibihii reerka iyo wiilkiisii oo shan jir ah kadib markii uu ku habsaday hoobiye.
Waxaa kaloo halkaa ku dhawacmay hooyadii reerka oo markaa... Banaanbax lagu taageeray Xukuumadda Farmaajo oo Muqdisho ka dhacay. May 4, 2011 Banaanbax lagu taageerayay Xukuumada R/wasaare Farmaajo oo ay kasoo qeyb galeen Xildhibaano Taageersan Madaxweyne Shariif sheekh Axmed ayaa Maanta ka dhacay Baraxadda Ex-fiyoore ee Magaalada Muqdisho.
Dibadbaxan oo ay kasoo qeyb galeen Haween iyo caruur ayaa waxaa la hadlay xildhibaan Xusee Caraalle Cadaan ayaa sheegay in Xukuumada Farmaajo guullo ka gaartay dagaaladii ay xarakada Alshabaab kula gashay... Gedo oo degan iyo dhaq dhaqaaqyo ciidan oo kajira. May 4, 2011 Xaaladda Gobolka Gedo ayaa maanta degan kadib dagaalo culus iyo qaraxyo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen.
Wararka nagasoo gaaraya magaalada Garbahaarey ayaa sheegaya in ciidankii Al Shabaab iyo kuwa Dowlada KMG ah uusan maanta wax dagaal ah dhaxmarin gobolka. Goob joogayaal ku sugan degmada Garbahaarey ayaa sheegay in ciidamada halkaasi ku sugan magaalada ay godad ka qoteen si ay shabaab... Shabaab oo dad basaasnimo lagu Eedeeyay ku dishay Baydhabo. May 4, 2011 Maamulka islaamiga gobolada Bay iyo Bakool ayaa maanta fuliyay xukuno dilal ah oo ay ku rideen dad ay ku eedeeyeen in ay basaas u ahaayeen dalal shisheeye.
Munaasabada lagu qabtay magaalada Baydhabo ayna kasoo qeyb galeen mas’uuliyiinta maamulka Al Shabaab iyo boqolaal shacab ah ayaa lagu faah faahiyay shaqooyin ay faraha kula jireen dadka ladilay.
Garoonka Dr.Ayuub ee bartamaha Baydhabo ayay... Xukuumadda DKM ah ayaa ka hadashay arrimo la xariira sidii Amniga loo sii xoojin lahaa qodobo muhiim ahna kasoo saartay May 4, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) – Xukuumadda FKMG ah iyadoo ka duuleysa mas’uuliyadda ka saaran badbaadada shacabka, iyo Al-Qaeda oo la sheegayo inay damacsan yihiin inay u aaraan Hoggaamiyahoodii Osama Bin Laden ka dib markii la dilay iyo guul darooyinka joogtada ah ee kooxaha Al-Shabaab ayaa Xukuumaddu waxey sii dar-dar gelin doontaa howlaha sugida amniga.
Hay’adaha amniga ayaa tan iyo dilkii... Gudomiye Kuxigeenka Ahlusuna Sh. Maxamed Awlibaax oo Guulo balaraan ka sheegtay dagaaladii ka dhacay Gobolka Gedo isla markana beeniyay in la dilay Xasan Qoryooley iyo Cabirishiid Janan May 4, 2011 Gudomiye kuxigeenka Ahlusunna Sh. Maxamed Awlibaax ayaa saxafada uga waramay Xaalada guud ee Gobolka Gedo oo baryahaan ay ka socdeen dagaalo aad u qarar oo soo lablabtay aya shegaay in Dagaalo ka dhacayaymalmahaan Dagmoyin ka mid ah gobolka gedo ay Ciidamada Ahlusuna iyo Kuwa Dowladaay guulo waaweyn ka soo ka gareen. Sh. Awlibaax ayaa Sharaxaad dheer ka bixiyay Dagaalki ka dhacaay... Duqa Degmada Garoowe “Dawlada hoose iyadoon cidna kala tashan ayay go’aan ku gaartey iney duleedka Garowe u rarto dadka barakacayaasha” May 4, 2011 Xili mudooyinkii danbey ay isi,soo tareysey cabashooyinka kasoo yeeraya dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan Garowe ayaa markii ugu horeysey waxaa cabashooyinkaasi ka jawaabey duqa degmada Garowe C/asiis Nuur Cilmi waxaana uu sheegey qoysaskaan sababa loo rarayo iney tahay ka dib markii la arkey iney cuduro ka dilaaci karaan biyaha toga ku teedsan, ayna isticmaalaan
Duqa... Radio Allgedo/ Waraysiyo